Ikhekhe elibandayo le-tuna, isiqalo esisha kakhulu nesicebile. | Ukupheka Kwekhishi
UMontse Morote | 20/07/2021 09:00 | Iziqalo Ezibandayo, IMontaditos
Ikhekhe elibandayo le-tunaKuyashisa futhi izitsha ezibandayo kuphela ezisemoyeni, yingakho leli khekhe lilungile. Yisitsha esiphelele impela futhi sihle kakhulu, singafakwa njengesiqalo, sisikwe sibe yizicucu bese sibekwa njengesidlwana, futhi silungele isidlo sakusihlwa.
Lekhekhe elibandayo le-tuna, singalilungiselela kusengaphambili, ngakho-ke kuzobe kuphole kakhulu ngesikhathi sokudla. Kuyinto iresiphi elula kakhulu engashintshwa ukuze ikuthande, ngoba ungangeza ezinye izithako.
Kulula kakhulu ukuyilungiselela, ngesikhathi esifushane sikulungele.
Iphakheji eli-1 lesinkwa esisikiwe
Amakani angu-4-5 we-tuna
Iphakethe eli-1 lezinti ze-crab
1 ikani lemayonnaise
1 Imbiza Yeminqumo
Ukulungisa ikhekhe elibandayo le-tuna, sizoqala ngokupheka amaqanda. Sigeza futhi sisike ulethisi.
Somisa ulethisi bese siquma kancane, izinti zenkalankala neminye iminqumo, konke kugayiwe kakhulu. Sifaka konke ekubunjweni. Amanani azoba njengokuthanda kwakho. Ngemuva kwalokho sifaka i-tuna emafutheni, siyikhiphe kahle siyixube. Ungangeza imayonnaise encane ukuze uhlanganise kahle.
Sifaka ishidi lesinkwa esisikiwe emthonjeni esizosebenzisa wona. Uma ungenaso isinkwa esinde, ungasibeka ezikweleni zilandelana kathathu. Ngaphezulu kwesiqephu sokuqala sesinkwa sibeka ungqimba wengxube, ngaphezulu esinye isinkwa, esinye sinikeza ingxube ye-tuna nokunye kuze kubonakale kukuhle kuwe.
Simboza konke ngosizo lwe-spatula yemayonnaise bese siqeda ukuyihlobisa ngotamatisi we-cherry namaqanda ezigwaca. Sizohambisana no-ulethisi nxazonke.
Futhi kusala ukuyishiya efrijini amahora ambalwa ukuze kuthi lapho sekuyisikhathi sokuphaka kubande kakhulu. Ungasika yonke into ezigcawini bese ufaka i-skewer noma i-toothpick kuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Iziqalo Ezibandayo » Ikhekhe elibandayo le-tuna